Izingxenyekazi ze-Ecommerce ezisheshayo zeDeskithophu neselula | Martech Zone
Speed is imali. Kulula njengalokho uma kukhulunywa nge-e-commerce. Akubona abathengi kuphela abashiya isayithi lakho uma lingenzi kahle kudeskithophu noma kuselula. Izinga lenjini yokusesha kanye nesivinini sekhasi. Izinjini zokusesha azifuni ukuthi abasebenzisi bakhungatheke lapho bevakashela isayithi elihamba kancane, ngakho-ke akusizi ukuzibeka kahle.
Uma ngabe ipulatifomu yakho ye-e-commerce ilayisha kancane noma inolwazi olubi lomsebenzisi weselula, ungahle ushiye imali eningi etafuleni. Izinqola zokuthenga ezilahliwe zibiza amasayithi e-ecommerce ama- $ 4 trillion ngonyaka, futhi enye yezimbangela ezivame kakhulu zokulahlwa kwezinqola zokuthenga isivinini sokulayisha kancane.
Eqinisweni, abasebenzisi abangu-87% bayashiya izinqubo zokuphuma kokuthatha imizuzwana engu-7 noma ngaphezulu futhi amazinga okushiya akhuphuka ngama-30% njalo ngemizuzwana emi-2 ngesikhathi sokuphuma.
Ezentengiselwano zamaselula manje zikhula ngama-300% ngokushesha kunomkhakha. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukhethe ipulatifomu yakho ye-ecommerce ngokuya ngokuthi ilayisha ngokushesha kangakanani kumadivayisi eselula. I-66% yesikhathi esichithwa ukuthenga kwenziwa nge- # mobile futhi i-82% yabasebenzisi basebenzisa iselula lapho benza isinqumo sokuthenga
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi akuhlali kuze kube yipulatifomu uqobo. Ukucindezelwa kwesithombe, ukulondolozwa kwesikhashana, kanye namanethiwekhi wokulethwa kokuqukethwe nawo angathinta isayithi lakho nejubane lekhasi - ingasaphathwa eyokwakhiwa kwetimu yakho noma ithempulethi. Itimu eyakhiwe kabi kungxenyekazi emangalisayo isazodala izinkinga. Ukwenza kahle kwejubane ne-hardware enkulu epulatifomu ehamba kancane kungadlula izimbangi zakho.
I-Selfstartr ikhiphe imiphumela yokuqhathanisa ekhanda nekhanda yamasayithi e-ecommerce ukukhombisa ukusebenza okulingene kukodwa, okubizwa Ngabe Ipulatifomu Yakho Ye-Ecommerce Ishiya Imali Etafuleni? Manje yimaphi amapulatifomu aphume phambili? Ungaya kubo isihloko bese ulanda ukuhlaziywa okuphelele. Ngicabanga ukuthi benze umsebenzi oncomekayo.
Ijubane Leplatifomu enkulu ye-Ecommerce nokusebenza
Isivinini Sokulayisha Ezomnotho - 3D Cart, Big Cartel, Shopify, SquareSpace Ecommerce, neBigCommerce.
I-Google Mobile Page Speed ​​Score - Ama-ePage ku-1 & 1, i-Big Cartel, i-CoreCommerce, i-UltraCart ne-Shopify.
Isivivinyo Sobungani Seselula se-Google - I-SquareSpace Ecommerce, iBigCommerce, iCoreCommerce, i-Shopify ne-Woo Commerce.
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi we-Google Mobile - I-SquareSpace Ecommerce, i-BigCommerce, i-Woo Commerce, i-Shopify, ne-ePages ku-1 & 1.
Amapulatifomu we-Ecommerce asheshayo ku-Desktop naku-Mobile
Tags: Inqola engu-3daabacoibhokisi elikhuluI-BigCommerceinqola66i-corecommerceukuhlanganisaplatform ecommerceukusebenza kwepulatifomu ye-ecommerceamapulatifomu e-ecommerceiziqephuamapulatifomu asheshayo we-ecommercelindokuhlejigoshopukuma kukalamulaMagentoinqola evulekileinqola ephakemePrestaShopisoftwareqobothengaSparkpaysquarespace ecommerceI-ultracartukuqhumawoo ukuhwebaWooCommerceI-wp yezokuhwebax-inqola
Dec 27, 2016 ngo-3: 30 PM
b ******* - 3dcart fast - ru ngidding me - ive uzisebenzisile zonke futhi mhlawumbe kuhamba kancane kakhulu lapha e-US